नेपालदृष्टि । विवाह भएको बाह्र वर्ष भइसक्दा पनि मेरो घरको बगैँचामा कुनै सुन्दर फूल फुल्न सकेको थिएन । बाह्र वर्षमा त बगेको खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, तर मेरो भाग्यको खोला भने अहिलेसम्म फर्केन । मेरो रहर, रहरैमा सीमित भइरहेको छ ।
आफ्ना दौँतरी र तल्लो पिढीँ समेतकाको काख भरिसक्दा पनि मेरो काख भने रित्तै थियो । काख भरिएला भनेर बाह्र वर्षसम्म मैले के–के पो गरिनँ होला ? तर जे गर्दा पनि, जहाँ जाँदा पनि हात लाग्यो शून्य मात्रै ।
कति पटक त मैले श्रीमान्समक्ष कोख भाडामा लिने वा सौता नै हाल्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । तर उहाँले सधैँ एउटै रेडिमेड जबाफ दिने गर्नुहुन्थ्यो— ‘आ।।। नदुखेको टाउको डोरीले बाँधीबाँधी किन दुखाउँछ्यौ तिमी ? भए तिमीबाटै होला ? नभए हाम्रो भाग्यमै रहेनछ भनेर चित्त बुझाउँला ।’
सधैँ यसो भनिरहनुहुँदा, लाग्थ्यो कुरो ठिकै पनि हो । यसरी अरुको कोख भाडामा लिएर वा सौता नै हालेर जन्माएको बच्चालाई उनीहरुकै आमाले नखोस्लान् भन्न पनि त सकिन्न नि ? यदि मलाई नै दिए भने पनि मैले आफैले जन्माएको बच्चालाई जस्तो सच्चा माया र वात्सल्य दिन सक्ने हो वा होइन ? द्विविधाले पनि लखेटिरहन्थ्यो मलाई । फेरि डाक्टरले म पूर्ण रुपमा आमा हुन सक्षम छु भनेकाले झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि बाँकी नै थियो मनको कुनै कुनानिर । त्यसैले किन बाँझी आइमाईको पगरी गुँथिरहने भन्ने पनि लाग्थ्यो र चुपै लागेर बस्थेँ ।